किन आखा वरिपरी कालो कालो दाग बस्छ ? के कारणले हुन्छ यस्तो ? थाह पाउनुहोस् «
किन आखा वरिपरी कालो कालो दाग बस्छ ? के कारणले हुन्छ यस्तो ? थाह पाउनुहोस्
भिटामीन एमा भएको एन्टी अक्सिडेन्ट तत्वले बुढ्यौली रोक्न विशेष भूमिका निर्वाह गर्छ । भिटामीन ए छालाको सुख्खापनसँग बढ्ने क्षमता राख्छ जसले आँखाको तल देखिने कालोपनलाइ निर्मूल पार्छ । शरीरमा भिटामीन एको मात्रा बनाइ राख्न मख्खन, तरबुजा, आँप लगायत पलफुल र खाद्यन्न खान सकिन्छ । -हाम्रोडाक्टर/एजेन्सी